Fahalotoan’ny Rano Mitera-doza Ho An’ny Aina Sy Ny Tontolo Iainana Ao Amin’ny Tany Hay Tengger · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Novambra 2012 9:51 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, 日本語, English
Tato anatin'ny andro vitsy, ireo mpikambana ao amin'ny tarika Yellow River 10-Year Investigation [zh] – Fanadihadiana isaky ny 10 taona momba ny Renirano Mavo – dia nanomboka nitatitra ny teo-draharaha mikasika ny fahalotoan'ny rano ao amin'ny tany efitr'i Tengger any Mongolia Afovoany. Milaza ilay tarika fa misy rano miloko mainty avoakan'ny indostria simika mpanodina arintany ao amin'ilay distrika be indostria mandoto ireo rano ambanin'ny tany any amin'io tany efitra io, manimba ny faritra fiompian'ireo mpiompy any an-toerana ary mitondra loza mitatao amin'ny fiainan'ireo miaina ao amin'ilay tany efitra.
Ny fanadihadiana dia ezaka nataonà fikambanana iray tsy mitady tombontsoa tamin'ny 2012 niarahana nanomboka tamin'ny Green Sina [zh] sy Green Earth Volunteers. Vao haingana dia nitsidika ny tany efitr'i Tengger ilay tarika ary nitatitra ny dian'izy ireo teny anaty media sosialy Shinoa. Lahatsoratra tanaty fitorahana bilaogy kiritika, niparitaka be mihitsy, nosoratan'i Ai Ruogan, malaza amin'ny fandefasana podcast sady mpikambana ao anatin'ilay tarika mpanao fanadihadiana, no manazava ao amin'ny Sina Weibo nanomboka ny 29 Oktobra 2012.
Sary natambatambatra ahitàna ireo rano maloto avy amin'ny indostria any amin'ny tany hain'i Tengger. Nakarin'i Ai Rougan.
Amin'izao fotoana izahay dia manao fanadihadiana any amin'ny ditrika be indostria ao amin'ny tany efitr'i Tengge ao Alxa Zuoqi, Afovoan'i Monglia. Ny masoko no mahita ireo orinasa vaventy mitatitra rano voaloto aminà fiara vaventy ary manary izany ao amin'ilay tany efitra. Lasa toy ny farihy kely ilay rano avy eo. Any amin'ny faritra sasany, mampiasa fantsona sy paompy ry zareo handefasana ny rano malotony ho any afovoan'ilay tany efitra. Anjatony metatra vitsy miala amin'ireo orinasa no misy ny lavadranon'ire mpiompy. Sady koa, misy farihy voajanahary hoan'ireo vorona dia miala sasatra eny akaiky eny eo. Manontany tena aho raha toa ireny vorona ireny ho afaka hiaina fotoana ela… efa misedra aretina leucémie sahady ny sasany amin'ireo mpiompy…
Song Fuli, mpikambana hafa iray ao anatin'ilay tarika, no nitondra sary ho porofo [zh], mampiseho ny fomba fampiasan'ireo orinasa vaventy ireo fantsona hitrohany ny rano hankany amin'ny tany hay :
Afenina ny fantsona mitondra ny rano mankany amin'ny tany hay. Atidoh'orinasa re izao, governemanta be atidoha! Tsarovy fa ity no distrika be orinasa ao Alxa Zuoqi, Afovoan'i Monglia. Maily roa (telo kilaometatra) monja miala eto no misy ireo mpiompy.
Sary mampiseho ny fomba itrohana ny rano maloton'ireo orinasa vaventy ireo hankany amin'ny tany hay. Sary nalain'i Song Fuli.
Wang Yongchen, mpandrindra ny Green Earth sady koa mpikambana iray ao amin'ilay tarika mpanao fanadihadiana, no nitanisa ny zavatra hitany tao amin'ny Sina Weibo [zh]:
@Wang: Ity no dobo fikarakarana ny rano anangonan'ireo orinasa avy ao amin'ny faritra be indostria ao Tengger ny rano maloton-dry zareo. Ratsy be ny fofona ary mahamamo anay mihitsy na dia efa manarona ny vava sy ny orona aza izahay. Miteny ireo mpiompy ao an-toerana fa rehefa lohataona, na ny mason-dry zareo aza tsy vitany ny manokatra azy rehefa eny akaikin'ilay dobo ry zareo. Ny famotehana ny faritra fonenan'ireo mpiompy sy ilay tany haim-bolamena ve no sanda aloantsika mba ho maoderina kokoa ny fiainana?
Zara raha misy 1,5 km miala amin'ireo dobo fikarakarana ny rano maloto no misy ireo lavadrano. Sary avy amin'i Wang Yongchen.
@Wang: Ny lavadrano manome rano fisotrao ho an'ireo mpiompy dia zara raha misy iray kilaometatra sy sasany miala amin'ny dobo fikarakarana ireo rano maloto. Roa metatra eo fotsiny no halalin'ny rano. Nanontanianay raha azo antoka azo sotroina ny rano. Nilaza ruy zareo fa tsy mahita rano na aiza na aiza. Ity no toeram-ponenany.
@Wang: Ny tany hain'i Tengger dia toeram-ponenana ihany koa ho an'ireo gisa dia, vorona dia, rameva. Ankehitriny izao izay anarian'ireo orinasa rano miloko mainty any an-tany efitra, aiza indray no toerana hipetrahan'ireo vorona rehefa mody masoandro iny?
@Wang: Amin'izao, mararyan-doha daholo izahay rehetra ato anaty fiara, aretin-tenda sy fanaintainana any anaty tratra. Nihevitra ny hitondra santionany tamin'ilay rano izahay ho entina tiliana anyamin'ny laboratoara any Beijing, saingy tena nahatsiar ho narary loatra. Mampanotany tena ahy ny mbola ahafahan'ny aina hitohy eto. TSy takatry ny saiko.
@Wang: Ho fanonerana ny fahavoazan'ireo mpiompy, nomen'ilay orinasa 20.000 RMB (eo amin'ny 3.000 Dolara Amerikana eo) tsirairay avy ry zareo ho toy ny onitra. Nambaran'ireo mpiompy fa ny sekreteran'ny antoko tao amin'ny tànana ihany no tompon-kevitra tamin'ny fifampiraharahàna. Rahampitso izahay no hanao ny fanadihadianay. Manontany tena aho raha ta tena tsy mahafantatra marina ny resaka ekolojia ao amin'ilay tany hay ireo manamapahefàna na dia tsy tsy miraharha tsotra izao fotsiny.
Araka ny voalazan'ny taitra iray avy ao an-toerana [zh], ilay rano avoakan'io distrika indostrialy io dia avy aminà orinasa mampiasa akora simika ho fanodinana ny arintany. Na dia misy fotodrafitrasa fikarakarana ny rano aza ao amin'ilay distrika, tsy mbola amperin'asa hisahanana ny fahavoazana izany. Ny vokany dia ilay rano voapoizina tehirizina anaty dobo miandry izay hahalasa entona azy, na amin'ny tranga sasany, ariana an-tsokosoko ao amin'ilay tany efitra.
Ny andro manaraka, ny 30 Oktobra, nitsidika ny sehatra ambonimbony kokoa ny tarika mpanao fanadihadiana, hoy i Ai Ruogan nanohy ny tatitra nataony [zh] :
Ny maraina, nanohy nanadihady tany amin'ilay tany hay izahay. Any amin'ny faritra ambonin'ilay toby fikarakarana rano, dia afaka mahita tsara isika rano madio mangarahara mikoriana. Tsy fantatsika hoe mandra-pahoviana no hikoriana toy izany ny rano madio. Lahy antitra iray, Hubudai, no nanontany hoe “ahoana moa no ny olona sasany mandany vola hiarovana ny tontolo iainana, raha ny sasany indray kosa manimba ny lemaka mba hahazoam-bola? Tsy tiako ny vola, ny tany nahalatsahan'ny tavoniko sy ny lemako no tiako. Ny firoboroboan'ny indotria simika no nanery anay handao ny taninay.”